Rosia: Jery todika ny aterineto 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2011 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, বাংলা, македонски, English
sary nalain'i storozhenko/Flickr
Raha ny hevitr”i RuMetrica [RUS], dia 38 tapitrisa isan'andro ny mpanaraka ny RuNet tamin'ny Novambra 2010. Teo amin'ny fitomboana 40 isan-jato izany raha mitaha amin'ny tamin'ny herintaona. Latabatra boribory “RuNet 2010″ natao tany Duma (parlemanta Rosiana ) tamin'ny Desambra tamin'io taona io no nanasongadina koa ny hoe misy mpampiasa aterineto miisa 46.5 tapitrisa eo amin'ny firenena. Ity no isa avo indrindra amin'ny mpampiasa aterineto any Eoropa. Na izany aza, mbola tavela aty aoriana i Rosia eo amin'ny firotsahana amin'ny aterineto.
Tena mavitrika mamaky vaovao amin'ny aterineto ny Rosiana ary manadino tsimoramora ny haino aman-jery nentim-paharazana. 19.6 isanjaton ‘ny mpanaraka seha-baovao eo amin'ny aterineto no an'ny RuNet. Ny sehatra hafa be mpampiasa dia ny momba ny fandraharahana, solosaina ary ny sarimihesika amin'ny taha 15.9 isan-jato, 12 ary 9.8 isanjato amin'ny mpanaraka azy tsirairay avy.
Heverina ihany koa hoe nanjary liana kokoa amin'ny fitsidihana ny tranom-bakoka nasionaly sy fampirantiana zavakanto amin'ny fomba niomerika ny Rosiana raha mihena kosa ny hatendàny eo amin'ny mozika amin'ny aterineto. Manazava izany i RuMetrica amin'ny fitobahana tafahoatran'ny mozika eo amin'ny tambajotra sosialy (ny tena malaza amin'izy ireo, Vkontakte.ru, dia tena fantatra amin'ny fampiantranoana vontoaty marobe tokoa misy zon'ny mpamorona izay mora ho an'ireo mpampiasa azy ny maka azy). Etsy andanin'izany, dia milaza ihany koa i RuMetrica, fa vao haingana dia efa nanjary azo jerena amin'ny endriny virtoaly ny tranom-bakoka nasionaly ary olona maro avy amin'ny faritra maro sy lavitra no nahazo ny anjarany hitsidika ny fampirantiana zavakanto faratampony amin'ny aterineto.
Nalaky niroborobo be (nitombo habe) sy nalàza ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Rosiana – misy bilaogy miisa 30 tapitrisa any - ny taona 2010. Raha ny hevitry ny sampana miandraikitra ny haino aman-jerim-bahoaka Public.ru [RUS], dia in-6000 nitatitra vaovao avy amin'ny tontolon'ny bilaogy ny haino aman-jery nentim-paharazana tamin'ny taona 2010. In-30 avo heny noho ny tamin'ny dimy taona lasa izany.
”. Milaza ihany koa i Public.ru fa ny mpitoraka bilaogy mahaleo tena dia tena navitrika nandray anjara amin'ny fanefena ny saim-bahoaka tamin'ny taona 2010. “Nanomboka nahita ny vaovao tamin'ny Livejournal.com [ny seha-pifaneraserana itorahana bilaogy tena malaza eo amin'ny firenena – GV], ireo mpanao politika, manampahefan'ny governemanta, fiarahamonina sy ny haino aman-jery nentim-paharazana ” hoy ny Public.ru manoratra. “Niteraka vaovao mijidina hafa indray izany: fiarahamonina-mpitoraka bilaogy-media-manampahefana.”
Ireo lohahevitra dimy faratampony eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Rosiana tamin'ny taona 2010 izay mora niparitaka tamin'ny haino aman-jery fototra dia ireto avy:
Ny ady mba hitsinjovana ny Alan'ny Khimki (jereo eto ny lahatsoratra GVO).
Ny lozam-piarakodia nahavoarohirohy ny filoha lefitr'i Lukoil (jereo eto ny lahatsoratra GVO).
Ny fanoherana “Blue buckets” (jereo eto ny fehiny GVO ary koa eto)
Ny trangan'i “Perl Lieutenant” (horonantsarinà lietnà Rosiana novonoin'ny mpanohitra tany Mosko).
“Rynda” sy ny doroala Rosiana (jereo eto ny lahatsoratra GVO ary koa eto).
Anisan'ireo mpitoraka bilaogy Rosiana sangany ry navalny (jereo ny fanadihadiana nataon'i GVO niaraka taminy eto), tema (mpanome endrika izay tia TOKOA mampiasa tenimboto), drugoi (Rosiana mpaka sary ), top-lap (nahantona ny bilaoginy, nitatitra an'izay ny GVO vao haingana) ary i doktor-Liza (eto ny vaovao avy eny ifotony).
Azo ekena tsy amin-tahotra fa hitohy hivoatra ireo lohahevitra nasongadina teto amin'ny aterineto nandritra ny taona 2010 amin'ireo taona ho avy. Mbola hitohy hitombo ny tontolon'ny bilaogy Rosiana ka haka ny toeran'ny haino aman-jery nentim-paharazana eo amin'ireo habetsahan'ny mpampiasa sy fironana. Satria moa mihamaro ny Rosiana miditra aterineto, dia seha-pifaneraserana maro ara-tsosialy no hampifandrohy sy hampikambana ny olona. Hitondra amin'ny fanapariahana haingana ny vaovao izany. Tena azo antoka fa hanafàna ny lafiny ara-politika maro eo amin'ny RuNet ny fifidianana filoham-pirenena Rosiana amin'ny 2012. Jeren'ny ankamaroan'ny Rosiana ho toy ny tsy azo ianteherana sy mpanao kolikoly, tena ho henjana ny fifanoheran'ny endriky ny haino aman-jery nentim-paharazana sy ny tontolon'ny aterineto izay hafanain'ny adihevitra ara-politika.
Hahita tantarana fahombiazana maro ihany koa isika mikasika ireo olon-tsotra mpanao gazety sy ny fahavitrihana amin'ny aterineto amin'ny taona 2011. Maro amin'ireo tantara ireo (sy ny mpitoraka bilaogy) no tsy hisy afa-tsy baikoin'ny ady ara-politikan'ireo vondrona samihafa efa galifantsy eo anivon'ny fahefana. Eny, hanao andrana maro hiezaka ny hibaiko ny vaovao amin'ny aterineto ny fanjakana Rosiana. Ho maivana sy tsy dia handaitra ny ankamaroan'ireo andrana ireo.
Raha ireo rehetra ireo, dia ho tena hihetsiketsika tokoa ny taona 2011 ho an'i RuNet. Ho taona hahafinaritra ho antsika ihany koa izany, isika olona miasa eo amin'ny RuNet Echo. Olona izay liana sy voasinton'ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny tontolon'ny aterineto Rosiana. Tena mirehareha isika miandry indray ny fifampizarana tantara miaraka amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena mitondra ny RuNet hanakaiky kokoa ny ambin'izao tontolo izao.
ARAHABA TRATRY NY TAONA!!!